eNasha.com - ताज्जुबको परिवर्तन !
ताज्जुबको परिवर्तन !
१९ वर्षअघि उनी विरामी हुनु पहिले पोल्याण्डमा कम्युनिष्ट शासन थियो । चारैतिर अभाव, पसलहरुमा खाने कुरा किन्न पाइन्नथ्यो, मानिसहरुको अनुहारमा उदासिनता थियो । यतिबेलै रेलवेमा काम गर्ने ६५ वर्षीय जन ग्रेब्स्की एउटा गम्भीर सडक दुर्घटनामा परे । त्यसपछि उनी १९ वर्षसम्म कोमामा रहे । बेहोसीमै उनी खान्थे, पिउँथे, आची गर्थे । उनलाई उनकी श्रीमतीले हरेक घण्टा उनको सुताइको अवस्था परिवर्तन गरिदिन्थिन् । श्रीमती गेत्रुदाको सेवाले १९ वर्षपछि उनको होस मात्र आएन, होस खुलेपछि उनको दिमाग चकराइरहेको छ ।
"१९ वर्षअघि कम्युनिष्टहरुको ज्यादै कष्टकर शासन थियो, अहिले चाहिँ लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्र मौलाएछ", जनले स्थानीय टेलिभिजन टीभीएन २४ लाई आफ्नो आश्चर्यलाग्दो परिवर्तनबारे बताए । उनी सन् १९८८ मा सडक दुर्घटनामा नराम्रोसँग परेका थिए, जसका कारण १९ वर्षसम्म उनी अचेत अवस्थामा अस्पतालमै रहेका थिए ।
डाक्टर बोगुस्लाव पोनिटोस्की पनि अचम्ममा परेका छन्, १९ वर्षसम्म अचेत भएर लडिरहने बूढा बाको स्वास्थ्य परिवर्तन भएको देखेर ! उनले थप्न चुकेनन्- "यो सब श्रीमती गेत्रुदाकै कमाल हो, जसको सेवा र उनको समूहले उनलाई आज जीवितै देख्न पाइयो ।"
"जब म कोमामा थिएँ, त्यतिबेला पसलमा चिया र भिनेगर (एक किसिमको अमिल्चो झोल पदार्थ) मात्र पाइन्थ्यो । मासु किन्न पाइनु भाग्य थियो अनि पेट्रोल किन्ने लाम चाहिँ चारैतिर देख्न पाइन्थ्यो", १९ वर्षअघिको घटना सम्झँदै उनले भने- "अहिले त हरेकको हातमा मोबाइल, मान्छेका हँसिला अनुहार, पसलभरि आँखै नथाक्ने चिजबिजहरु पो पाइन थालेछन् । यी सब देख्दा त मेरो दिमागै चकरायो !"
उनी लामो बिरामीबाट ब्यूँतदा त आफ्ना चार बालबच्चाले बिहे मात्र गरेनछन् कि तिनका ११ जना नातिनातिना पनि खेलाउन सकिने भएका रहेछन् ।
तर यति हुँदा हुँदै पनि उनका सबै परिवारहरु कोमामा रहँदा उनको वरिपरि घुरुप्प घेरिएर उनीसँग सम्वाद गर्न चाहेको तिनको क्रियाकलाप चाहिँ मधुरो रुपमा अझै पनि सम्झेका छन् ।